धान पहेँलिन थाल्यो, छैन युरिया मल « AayoMail
धान पहेँलिन थाल्यो, छैन युरिया मल
काठमाडौं–कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को निर्देशन अक्सिजन उद्योगहरुले पालना
महन्थ–राजेन्द्र पक्षका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राखियो
काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई भक्तपुरस्थित
अझै ठूलो कबिला-बुद्धि जमातबाट राजनेता, आधुनिक जंगबहादुर, राष्ट्रवादका ठेकेदार र
युरिया मल अभाव हरेक वर्ष दोहोरिने र कच्पल्टिएको समस्या हो। यतिबेला किसानका लागि यो समस्या गाँडे घाउझैं बनेको छ। धानमा धमाधम मल हाल्ने बेला भएको छ तर, मल छैन।
मलको चरम अभाव हुँदा झापाका किसान चिन्तित छन्। मरिहत्ते गरेर रोपेको धानमा समयमा मल हाल्न नपाए उत्पादन घट्ने चिन्ताले किसान पिरोलिएका हुन्।
मल आउने टुंगो त के आससमेत छैन। धानमा मल लगाउने सिजनमा अभाव हुँदा किसान चिन्तित बनेका हुन्।
मल अभावले गर्दा धान नफल्ने अवस्थामा पुगेको किसान बताउँछन्।
झापा पाँचगाछीका किसान भक्तिप्रसाद सिटौला साउनभरमा धानमा मल हाल्न नपाए पसाउन नसक्ने बताउँछन्। 'धान रातो भएर बिग्रिन सुरु गरेको छ,' उनले भने, 'अब एक सातासम्म युरिया हाल्न नपाए धान नफल्ने अवस्थामा पुग्छ।'
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष मलको अभाव बढेको उनी बताउँछन्। उनीमात्र होइन झापामा अधिकांस किसान अहिले मल अभाव झेलिरहेका छन्।
'धानमा युरिया मल हाल्ने बेला भयो तर, अहिले १ केजी पनि मल पाइने अवस्था छैन' झापा गाउँपालिकाका किसान देव बस्नेतले भने, 'समय बितेपछि हालेको मलको कुनै काम छैन।'
धानको बिउमा हाल्ने मल नपाएर ब्ल्याकमा किन्नुपर्यो, अहिले पनि ब्ल्याक मै परिएला जस्तो छ,' बस्नेतले थपे। बोर्डरतिर जाँदा लुकिछिपी ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि ब्ल्याकमा, बोराको १८ सय जति पर्छ, सुरक्षाकर्मीले दुःख त्यत्तिकै दिने बस्नेतले सुनाए।
गौरीगन्जका किसान पूर्ण राजवंशीले चैते धानमा आधा बोरा मल ल्याएर हाले पनि अहिले त त्यो पनि सम्भावना नभएको सुनाए।
केही पसल सञ्चालकले लुकाएर भारतबाट ल्याएको मलको मूल्य छोइनसक्नु महँगो रहेको किसानहरू बताउँछन्।
बजारमा मलको अभाव भएपछि व्यापारीले ५० रुपैयाँ किलोको दरले युरिया मल बिक्री गरे पनि त्यो पाउन कठिन भएको किसानहरू बताउँछन्। झापामा सहकारीले युरिया वितरण गर्ने गरेका छन्।
युरिया अभावका कारण सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्र युरिया बिक्री गर्न गर्ने गरेका छन्। युरियाको अभावले विगत वर्षजस्तो धान उत्पादन नहुने चिन्ताले किसान पिरोलिएका छन्।
के भन्छन् सिडिओ
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मलखाद आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समिति हुन्छ। सरकारी तहमा त्यही समितिले मल सम्बन्धित निकायलाई वितरणका लागि उपलब्ध गराउने गर्छ। सरकारले पठाए वितरण गर्ने तर ल्याउने अधिकार आफूहरूलाई नहुने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले बताए।
'हामीले मल ल्याउने होइन, केन्द्रीय सरकारले पठाए वितरण गर्ने हो,' उनले भने, 'मल प्रदेश सरकारसँग पनि छैन, साउन २० गते बैठक बसेर मल तत्काल पठाइदिन लेखेर पठाएका छौं, आयो भने समानुपातिक ढंगले वितरण गर्छौं।'
उनले झापामा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड मल ल्याउने पहल गरिरहेको बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन नसक्ने बताउँछ।
'साल्ट ट्रेडिङ स्वायत्त संस्था हो, उसले ल्याउन सक्छ,' उनले भने, 'अरुले ल्याउन सक्दैन, हामीले मल अभाव भएको लिखित जानकारी संघीय र प्रदेश सरकारलाई गराइसकेका छौं, हाम्रो तहबाट अरु केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन।'
मलको आवश्यकता र किसानको समस्याबारे केन्द्रलाई पटकपटक अवगत गराएको उनले जानकारी दिए। ‘मलको समस्या जगजाहेर नै छ,’ उनले भने, ‘मल नआउँदा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले डेलिगेसन आएर हैरान पारिसक्नुभयो।’
सरकारीस्तरबाट झापामा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस सिजनमा झापामा कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। यद्यपि ४२ मेट्रिक टन मल भए पुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी बिर्तामोडका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चापागाईंले बताए।
उनले आयात रोकिएको कारण सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। 'कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा नै मल आयात भएको छैन' चापागाईंले भने, 'विराटनगर हुँदै मल झापा आउने हो, अहिले त्यो सम्भावना नै छैन।'
यस वर्ष आवश्यक मल उपलब्ध गराउन नसकेको चापागाईंले बताए। थप युरिया छिटो उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनिएको उनको भनाइ छ।
युरिया नपाएर किसान समस्यामा परेका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भदौ पहिलो साता मल आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मगाएको मल भारतको कोलकाता आइपुगेको र त्यहाँबाट वीरगन्ज–विराटनगर हुँदै बिर्तामोड ल्याउन केही दिन लाग्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बिर्तामोड शाखाका प्रमुख देवराज भट्टराईले बताए।
उनले झापा जिल्लाका लागि ५० हजार बोरा मल मगाएको जानकारी दिए। तर, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख नीलकमल सिंह त्यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनले टेण्डर आह्वान गरिएको ११७ दिनमा मात्रै मल नेपाल आइपुग्ने बताए।
नेपालमा अफगानिस्तान, साउदी अरब, चीन, जापालगायत देशबाट मल ल्याउने गरिएको छ। काठमाडौंको सैलुङ इन्टरप्राइजेजले ८५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने टेण्डर पारेको थियो। तर, उसले टेण्डर आह्वान नै नगर्दा मल अभाव भएको नाम नलेखिदिने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए। सैलुङ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीको कम्पनी हो।
झापामा अहिलेको धानबालीका लागि ४ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक छ। तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २५ मेट्रिक टन मलमात्र आपूर्ति गर्ने भएको छ। कृषि सामग्री संस्थानले मल आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि समस्या आएको हो।
साउन २० गते बसेको जिल्ला मलखाद आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले केन्द्रसँग ४ हजार मेट्रिक टन मल माग गरेको छ। तर त्यो आउने नआउने पत्तो छैन।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ९० वटा डिलर आबद्ध छन्। त्यस्तै कृषि सामग्री संस्थानसँग अलग्गै डिलर रहेको छ।
यस वर्ष लगातार वर्षा भइरहेकाले झापामा विगतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिनको ९९ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ।
केन्द्रका प्रमुख सिंहका अनुसार यस वर्ष ८७ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष ९७ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको थियो। धान रोपेको २५ दिनमा युरिया मल टपलेस गर्नुपर्ने भएकाले अहिले क्रिटिकल अवस्था आइपुगेको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताए।
बेलैमा मल नआउँदा धेरै किसानको धान बाली बिग्रिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिंहले किसान कार्यालयमा कहिल्यै मौखिक वा लिखित जानकारी नगराएको बताए।
प्राङ्गारिक र जैविक मल प्रयोग गर्ने बानी हटेकैले अहिलेको समस्या आएको उनको तर्क छ। कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्नेको संख्या न्यून हुँदा अवस्था जटिल बनेको उनले बताए।
'पहिला अन्त अन्त कुरा पुग्दोरहेछ, कृषि ज्ञान केन्द्रमा घुमेर मात्रै कुरा आउँदोरहेछ,' सिंहले भने। उनले विपल्पमा आल्मुनियम सल्फेट र नाइट्रोजनयुक्त मल प्रयोग गर्न सकिने बताए। तर त्यसका लागि डोज थाहा हुनैपर्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनमा उत्रिए किसान
अभावै–अभावमा कृषि पेसा अंगालेका किसानलाई पछिल्लो समय युरिया मलको समस्याले पिरोलेको छ। खेती गर्नकै लागि आकाश हेर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानले युरिया मल पाउन नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको हो।
सरकारले समयमै रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा कतिपय किसान मलबिना नै खेती गर्न बाध्य छन्। कतिपय किसान मल कहिले आउला भन्ने पर्खाइमा छन्।
कोरोना महामारी रोकथाम गर्न किसानले सरकारले लगाएको लकडाउनलाई साथ दिए। लकडाउन हटिसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। शिवसताक्षीका कृषकहरूले कृषि मल समयमा नपाउने र खुला सिमानाबाट आएको मल दोब्बर मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्लेकार्ड बोकेर मौनजुलुस निकाले।
‘किसानले मल बीउ पाउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो सरकार? बाढीले खेती लग्यो किसानलाई मर्का, समयमा मल नपाएर बाली बिग्रन्छ किसानलाई नै मर्का यो कहिलेसम्म सरकार? कृषिमा कमिसनको खेल कहिलेसम्म सरकार? निजी क्षेत्र पोसियो किसानको खुसी खोसियो,’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकी स्थानीय युवाको सक्रियतामा शिवसताक्षी ४ का किसानले विशुवाडुब्बा क्षेत्र परिक्रमा गरेका थिए।
प्लेकार्ड बोकेर उभिएका कृषक पदम राजवंशी भन्छन्, ‘सरकारको प्रवृत्ति निको लागेन, धानको बाला लाग्ने बेला भइसक्यो, यो बेलासम्म पनि सरकार मौन रहनु भनेको कृषकप्रति कम उत्तरदायी भएको आभास हुँदै छ। खेती किसानीलाई बाली धेरै भित्र्याउने आस हुन्छ, के गर्नु मल भने पाइएको छैन।’
निर्वाचनअघि कृषकको बारेमा सकेसम्म गर्छौं भनी वाचा दिएर जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर उपल्लो तहसम्मका नेताहरूले कृषकलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र हेरेको अर्का किसान दिपेश बुढाथोकीको बताउँछन्।
'सरकारले कृषि पेसालाई प्राथमिकता दिएको छ भन्छ तर समयमा मल उपलब्ध गराउन सक्दैन,' जगत राजवंशी भन्छन्, 'किसानको दुःख कसले बुझिदिने खोइ ! नेताको आश्वासनले त्यतिकै धान नफल्दो रहेछ अनि सडकमा निस्कनुपर्‍यो।'
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले पनि आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि युरिया मलको चरम अभाव भएको हो। भारतीय युरिया मल अहिले प्रतिबोरा २ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरिएको छ। जसरी भए पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु परेकोले महँगो मूल्यमा किनेर बिक्री गर्नुपरेको व्यापारीहरू सुनाउँछन्।
बेलामा मल उपलब्ध नभएपछि कालोबजारी बढेको हो। तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो परिणाममा युरिया आवश्यक पर्ने यस समयमा सरकारी बेवास्ताले मल अभाव भएको किसानको भनाइ छ।
अघिल्लो वर्ष झापामा ६ हजार २६५.६ मेट्रिक टन युरिया खपत भएको थियो। सामग्री कम्पनी बिर्तामोडको तथ्यांकले देखाउँछ। सोही वर्ष झापामा २ हजार ६६५.६ मेट्रिक टन डिएपी र ३१०.६ मेट्रिक टन पोटास खपत भयो।
कहाँ कति खपत
कृषि सामग्री कम्पनी बिर्तामोडले पाँचथर र ताप्लेजुङमा पनि मल निर्यात गर्दै आएको छ। भौगोलिक हिसाबले ताप्लेजुङ ठूलो भए पनि झापामा बढी मल खपत हुँदै आएको छ। अहिले दैनिक रूपमा झापाका ५० भन्दा बढी सहकारीले मलको विषयमा बुझ्ने गरेका छन्।
४२ मेट्रिक टन कृषि चुनको प्रयोग भएको कृषि सामग्री कम्पनी बिर्तामोडको तथ्यांक छ।
ताप्लेजुङमा ७२.५०० मेट्रिक टन युरिया निर्यात भएको थियो। डिएपी १.४ मेट्रिक टन र पोटास ०.१ मेट्रिक टन निर्यात भएको तथ्यांक छ। त्यस्तै, पाँचथरमा ४२ मेट्रिक टन युरिया निर्यात भएको थियो।
झापा बढी क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने गरेको छ। त्यही तुलनामा रासायनिक मलको प्रयोग पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। पहाडी जिल्लामा धानमा कम मलको प्रयोग हुने गरेको छ।
काठमाडौं–जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) काे महन्थ–राजेन्द्र पक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई भक्तपुरस्थित एक रिसोर्टमा लगेर राखेकाे छ। पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएका एक